Rio de Janeiro - I LOVE RIO- UKWABIWA
Ukukhangisa The Iwebhusayithi sika eliqhutshwa izimiso ezintathu:, ukusatshalaliswa noma ukusatshalaliswa exhasiwe okubhekiswe nokusakazwa creative kokuqukethwe kanye neminikelo okuhlobene.
Kunezinhlobo ezehlukene I LOVE Rio imikhiqizo, ezinye zazo ziyizilimi free ngilungele ukusetshenziswa nokusakazwa, okusho ukuthi amakhasimende akudingeki ukuba akhokhe lutho ukufunda okuqukethwe zomlando namasiko abacebile ulwazi, kanye nabasabalalisi akudingeki ukuba akhokhe babe Iwebhusayithi abanazo njengoba umkhiqizo okunikwa amakhasimende
Ingxenye I LOVE Rio ukusatshalaliswa isu kuhlanganisa izinhlelo ofanelana kanye ngokubambisana nentuthuko lemikhiqizo kanye nemikhiqizo, ukukhipha Rio de Janeiro sika amasiko image kokubili kuzwelonke nasemhlabeni jikelele.
Nakuba Portal ephumelelisa ukubonakala omhlaba kanye brand ukuqaphelisa abantu ngezinhlelo okuqukethwe khulula kanye eyingqayizivele sethulwa ngezilimi ezingaphezu kuka-50, iminikelo wendawo Carioca ukufinyelela ekujuleni Brazil nge ezihlukahlukene imikhiqizo umthengi.
Ukuthuthukiswa ahlangene okuqukethwe turky namasiko nge izincwadi online nephepha, kanye nemikhiqizo ezimele Carioca isiko, ukwakha omunye phezu komunye wanda multi-product brand yokuqwashisa.
Ofanelana okuqukethwe womhleli uhamba nesithandwa enobunye brand identity ezibukwayo kuzo zonke imigqa umkhiqizo, isetshenziselwa ukuchaza neminikelo promoteall ngesikhathi ukubiyela kubo ngaphakathi umlando kanye namasiko Carioca.
Ukunqoba kusukela okuningiliziwe izincwadi photo, izimonyo empahleni ezemidlalo, I LOVE Rio uzibophezele akhiphe abanye amagugu we Cidade Maravilhosa ngezindlela phakade ejule, ezintsha kanye creative.
Ngaphakathi Rio de Janeiro idolobha kanye isimo, I LOVE Rio okukhangiswayo ngokusebenzisa ukubonakala okusezingeni izindawo, lapho abafundi baziwa ukuba nesithakazelo izihloko, isitayela kanye ifilosofi Portal. Ngaphakathi the edolobheni laseRio, endaweni main yokukhangisa ngokomzimba basesimweni Zona Sul futhi Barra da Tijuca, ngokugxila ikakhulu emahostela, amahhotela kanye zezitolo
The Iwebhusayithi ILOVERIO.comuyingxenye global I LOVE Rio iphothifoliyo, kuhlanganise abacebile ukuphayona web Portal lapho ihlola futhi kabusha ucabanga emzini ngokusebenzisa ebubanzini kokuhlanganyela izihloko wesimanje, kanye izinkulungwane izithombe umoya-ukuthatha.
Ofanelana Okuqukethwe Womhleli
Zokuqwashisa Umkhiqizo Yehlukene
Identity Ezibukwayo Unique